Ọkụ ghari | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ọkụ ghari
Ònye na ihe na-emerụ raspberries
Raspberries bụ omenala dị ndụ dị ka poteto na tomato. Ya mere, a na-ekpughe ya na nje virus dị iche iche, bacteria na ụmụ ahụhụ nwere ike imerụ osisi ndị a nnukwu nsogbu. Ọ ka mma ịhụ ma gbochie mmepe nke ọrịa n'oge karịa ichere ruo mgbe ọ gafere n'onwe ya. Ụfọdụ pests na ọrịa nwere ike ibute mbibi nke bushes, nke ga-abụ nnọọ ihe na-eju anya na ị.
Ntak emi geranium epupụta gbanwee edo edo, ọgwụgwọ nke geranium
Ọ dị mma ịsị na onye ọ bụla nwere ụlọ osisi n'ụlọ, ma ndị bi na mba anyị nwere ịhụnanya pụrụ iche maka geranium. Ị ma? A na-akpọ geranium ụlọ "pelargonium". Isi ihe nchịkwa nke geranium Geranium, dịka osisi ọ bụla ọzọ, nwere ọtụtụ ndị iro. Ọrịa dị iche iche na pests nwere ike ime ka ọnyá geraniums dị njọ.
The intricacies nke na-eto eto chubushnik na ya na saịtị
Chubushnik bụ osisi nke ezinụlọ Hortensia. Ohia a nwere okooko osisi na-acha ọcha na ihe na-esi ísì uto nwere ike ime mgbagwoju anya na Jasmine. Isiokwu a bụ ihe mere ọ bara uru iji kụọ ubi jasmine na otu esi eme ya. Anyị ga-atụlekwa nlekọta kwesịrị ekwesị maka ha na ụdị mmepụta nke osisi na oge nke afọ mgbe ọ bara uru ịkụnye ihu.
Atụmatụ nke ụsụụ ndị na-eto eto n'ogige
Ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ n'anya abụghị naanị maka ihe ndị mara mma magburu onwe ha, kamakwa n'ihi na ha enweghị atụ. Ka o sina dị, akwụkwọ ndị e ji achọ mma dozie ọtụtụ. Ha na-emepụta ebe dị ịtụnanya maka osisi ndị ọzọ, na okooko osisi ndị ahụ na-adọrọ mmasị. Ị ma? Khost si na Latin aha biara ma nwee aha ọzọ - na-atọ ọchị.
Ogige Gerbera: kụrụ ma lekọta
Gerbera bụ osisi nke ndị ezinụlọ Compositae. E nwere ọtụtụ ụdị gerberas, nke a na-ahụkarị na agba, terry na ụdị inflorescence. Ka anyị leba anya n'ajụjụ ndị ole na ole gerberas oge ntoju, otu esi akụ ma lekọta ha. Ndị kasị ewu ewu n'ogige gerbera iche Taa, a na-amara ụdị 80 nke ifuru a mara mma.
Ọrịa na pests nke begonias: nkọwa ha na ụzọ ha si emeso ha
N'etiti osisi ime ụlọ, begonia bụ otu n'ime ndị a hụrụ n'anya, n'ihi na ọ bụghị nanị site na okooko ya mara mma, ma ọ bụ site na osisi ndị mara mma. Mana nlekọta nke osisi a chọrọ otutu, ya mere anyị ga-atụle ọrịa ndị a ma ama nke begonias na njehie na nsị ya. Nsogbu nke begonias na-adabere n'ihi ọnọdụ na-eto eto na-ezighị ezi ma lekọta ha. Ihe kachasị emetụta nsogbu nke begonias na-eto eto bụ na eziokwu ahụ adịghị mma.
Chrysanthemum - samurai ifuru
Isiokwu a na-elekwasị anya na "ifuru samurai" - chrysanthemum. Anyị ga-ekwu banyere otu esi eche maka chrysanthemum, otú o si amasị ala na ugboro ole ị chọrọ iji mee ka osisi ahụ dị mmiri. Tụlee pests ndị nwere ike ma kụziere ha ịlụ ọgụ. Anyị ga-agwa gị otu esi nweta ọnụ ala okooko nke chrysanthemums. Ị ma?
Kedu ihe na-arịa ọrịa goozberị na otu esi agwọ ya
Goozberị bụ nke na-eguzogide ọgwụ na ọrịa na pests. Ma, ọ na-eche ọrịa ndị dị ize ndụ ihu. A pụrụ ịgwọ ọrịa grizberị na nlekọta kwesịrị ekwesị, igbochi na njikwa oge. Mkpụrụ Mealy: otu esi emeso ọrịa fungal Ọtụtụ mgbe, ụdị ọrịa a na-apụta na goozberị n'ụdị nke na-acha ọcha oge ntoju nke na-ekpuchi tomato nke shrub.
Ọrịa na pests nke melons, isi nsogbu nke na-eto eto
Melon nwere ike ịdabere n'ụdị dị iche iche, ọrịa na nje na-ebute ọrịa, nke na-eduga ná njedebe nke mkpụrụ na mkpụrụ osisi. Ọtụtụ pests ndị na-eri nri na osisi nke osisi a na-emekwa ka ọ ghara imerụ ya ahụ. Ya mere, ịmara banyere ha dị mkpa. Taa, anyị na-ele anya ọrịa ndị kachasị mma nke melons na otu esi emeso ha, na-ekwukwa banyere pests nke melons na otu esi emeri ha.
Otu esi emeso ọrịa blackberry
Ebe obibi nke blakberị, bushes with curled thorns and delicious black berries is wide - this is North America and Eurasia. A na-eduzi ọrụ ozuzu na-arụsi ọrụ ike na nsị nke ụdị blackberry kemgbe narị afọ nke iri na itoolu na United States (ihe karịrị narị atọ ka e bred). Ihe a na-ewu ewu nke beri a dị na mba anyị na-eto eto - ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-elekọta anụ ọhịa amalitela ịghọta blackberry maka ya: ụtọ na obi uto; ọgwụgwọ na ihe oriri; elu mkpụrụ; enweghị nchekasị na nlekọta nke nlekọta; ike ọrịa ọrịa.
Ọrịa nke strawberries: mgbochi, ihe ịrịba ama na ọgwụgwọ
Na mmalite nke oge okpomọkụ, onye ọ bụla na-echesi ike na ihe ubi nke strawberries. Otú ọ dị, strawberries nwere ike ịdaba n'ọtụtụ ọrịa, ọ dịkwa mkpa ka a gwọọ usoro ọgwụgwọ na oge. Ma ọ bụghị ya, enwere ihe ize ndụ ịnọgide na-enweghị nri. Isiokwu a na-akọwa ọrịa ndị kachasị mma, ihe ịrịba ama ha, usoro ọgwụgwọ na usoro mgbochi ga-enyere gị aka ịzọpụta strawberries ma nwee ụtọ uto nke mkpụrụ ya.
Ọrịa na pests nke cannas na otu esi emeso ha
Kanna bụ osisi kachasị mmasị na ndị ọrụ ugbo na ndị na-elekọta ubi na okooko osisi dị iche iche. Otú ọ dị, ọ na-eme na canna anaghị ekwe ifuru, ọ bụ ezie na ọ dị ka ọnọdụ niile dị mkpa maka ya. Azịza nye ajụjụ mere ka ụdaba na-adịghị na-agba ọkụ nwere ike ịdịgasị iche n'ọnọdụ nke ọ bụla, mana ihe kpatara ya bụ mgbe niile na-elekọta ha.
Ọrịa na pests nke petunia: isi nsogbu na-eto eto
Ọmarịcha petunia na-adọrọ adọrọ na mara mma, ọ bụ ezie na ọ na-eguzogide ụdị ọrịa ọ bụla na-emekarị na-eto eto na ọnọdụ nke elu mmiri na okpomọkụ, ma anyị nọ n'ihu ubi bụ ezigbo ule. Ọtụtụ n'ime pests na ọrịa na-abanye n'ubi tinyere seedlings, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịkụnye petunia n'ógbè gị, ị kwesịrị ịma ntakịrị banyere otu esi agwọ ọrịa dị iche iche na nje.
Almond: ọgwụgwọ oge na-arịa ọrịa na Mbelata pests
Almọnd - mara mma nke ndida nke nwere okooko osisi di nma na nkpuru kachasi nma. A na-enye osisi almọnd ma n'ụdị osisi na osisi dị ogologo. Osisi almọnd ebe ọ bụ na ndị mmadụ na-etolite n'oge ochie, na nke mbụ e kwuru banyere almọnd dị n'ihe odide nke ndị Asiria oge ochie na Bible. Otú ọ dị, ọ bụghị mkpụrụ osisi almọnd ka a na-eri nri, ma ọ bụ ọkpụkpụ ha.
Esi chebe spruce site na oria
Onye ọ bụla n'ime anyị ga-achọ inwe osisi mara mma na ibé. Otú ọ dị, osisi a dị nnọọ njọ ma na-arịa ọtụtụ ọrịa. Iji na-eto eto magburu onwe ya, ogologo, na-agba ume, ị ga-etinye mgbalị dị ukwuu. Ihe kacha mkpa bụ nlekọta kwesịrị ekwesị. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe nwere ike ịkpata ọrịa na ọrịa nke mara mma ọkụ.
N'oge ọkọchị n'ubi ụfọdụ, ị nwere ike ịhụ osisi na-adịghị ahụkebe dị ka dope - ya na nnukwu ifuru na-esi ísì ụtọ. Osisi a shrub - Brugmancia, onye si mba South America. A na-eji nlezianya chọọ Brugmansia, na ọbụna ndị na-elekọta ubi na-enwe ike ịkụ ma lekọta ya n'ọhịa.
Mkpụrụ ọrịa mkpụrụ osisi dị ize ndụ: mgbochi, ihe ịrịba ama na ọgwụgwọ
N'agbanyeghị mgbalị ndị ọkachamara na-eme iji zụlite ụdị mkpụrụ osisi ndị na-eguzogide ọgwụ na ọrịa na nje, osisi ka na-adịrị ha mfe. Isiokwu a na-akọwa ọrịa ndị kachasị mma, ọrịa na mgbaàmà ha. Raspberry anthracnose Anthracnose bụ ero na-egosi dị ka tụrụ na stalks stalks.
Clivia, ma ọ bụ Kaffir Lily, bụ ezinụlọ Amaryllis. A na-achọta okooko osisi ndị a dị na ọhịa n'ókèala South Africa, taa, ọ bụ nanị ụdị atọ nke osisi a ka a maara. N'ihi àgwà ndị a na-achọ mma, enweghị nchekasị na nlekọta nke nlekọta, njedebe dị oke mma na ịgha ubi.